Teny: Ireo Feo Mam Dizitaly Voalohany Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2012 8:16 GMT
Mety haheno iray amin’ireo tenin-janantany maro mandritran’ireo resaka ifanaovan’ny mponina ao amin’ireo tanàna manodidina ireo tranom-boky monisipaly telo izay tohanan’ny Rising Voices amin'ny alalan'ny tetikasa tohanany Xela Civic Libraries ianao. Any amin’ny Departemantan'i Quetzaltenango any Goatemalà, mbola mitana anjara toerana lehibe ao amin’ny fiainana ambanivohitra andavanandro ny teny sahala amin’ny K'iche’ sy ny Mam. Hitan’ireo Tranombokin'ny Riecken, izay nametraka ireo tetikasan-tranomboky monisipaly any amin’ny tanànan’i Huitàn, Cabricàn, ary San Carlos Sija ny maha zava-dehibe ny fihazonana ireo tenin-janantany ireo.
Nanapa-kevitra ny hampandray anjara ireo mponina ao anatin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny alalan'ny fanangonana angano avy amin'ireo be-antitry ny tanàna sy hirakitra azy ireo anatinà endrikanà boky voahaingo sary manana dikan-tsoratra roa ireo tranomboky. Nanampy ho toy ny mpanadihady, mpanao sary, mpandika teny sy mpanoratra ireo mponina anatin’ny vondrom-piarahamonina mba nahavitàna boky miisa valo izay efa azon’ireo mponina any an-toerana ampiasaina. Efa nivoaka tao amin’ny Foaram-boky iraisampirenen’i Goatemalà [es] ihany koa ireo boky ireo tamin’ny faramparan’ny taona 2011.
Nandray anjara mavitrika tamin'ny fanamboarana ireo boky ireo i Román Díaz Castañon, mpitantana ny tranomboky ao amin'ny vondrom-piarahamonina sady mpandrindra ny tetikasa, tao amin’ny “Mi Nuevo Mundo” (Ny Tontoloko Vaovao) tranomboky monisipalin’ny tanànan’i Huitán. I Román dia tao anatin’ny ekipa nanambatra ireo lahatsoratra sy nandika teny ireo tantara izay notantarain’ny be-antitra Cruz Díaz sy Máximo Velásquez azy ireo noho izy mampiasa ny teny Mam. Anatin’ireo sokajy ireo ny boky mitondra ny lohateny hoe“Mjeb'le'n Toj Tnom Te Wi'ta'n” (Fanambadiana Any Huitán) ary azon’ny vondrom-piarahamonina vakiana amin’ny alalan’ny rindrambaikon'ny tranomboky. Mamaky sombin-dahatsoratra notsongaina tao anatin’ilay boky i Román ao anatin’ity horonam-peo ity:
Ity ny dika an-tsoratra sy ny dikantenin’ilay lahatsoratra araky ny famakian’i Román azy:
Taona maromaro taloha, nisy fanambadiana Mayan-Mam tao amin’ny faritr’i Huitán. Teo ambanin’ny hafanan’ny masoandro mody izay efa madiva hilentika, dia nisy ray aman-dreny, Yo'k sy i Paẍ, niady saina ny amin’ny zanany lahy Leẍ izay efa feno 18 taona, izany hoe efa tonga ny fotoana tokony hitadiavana vady ho azy. Raha ny fomban-drazan’ilay vondorom-piarahamonina dia anjaran’izy ireo ny mitady vady ho azy.
– Iza no tokony halaintsika ho vadin’ny zanantsika? Hoy i Paẍ tamin’i Yo'k
– Efa tonga taona izy ary efa fotoana izao hananany fiainana ho azy manokana
– Mieritreritra aho hoe ahoana ra i B'iẍ, zanak’i Loj..
Mpandray anjara iray hafa ao amin’ny tetikasa Xela Civic Libraries i Nélida Ramos, izay sady iray amin'ireo mpitantana ny tranomboky ao amin’ny tanànan’i Cabricán. Nizara ny fomba fiarahabana sasantsasany amin’ny teny Mam ihany koa izy ao anatin’ity horonam-peo ity.
12 ora izayAzia Atsimo
13 ora izayOseania